Dagaalka Camey iyo Cabdiwali Gaas Fashil Siyaasadeed mise Faragalinta dowlada Federaalka ? Faallo Xiiso leh | KALSHAALE
Dagaalka Camey iyo Cabdiwali Gaas Fashil Siyaasadeed mise Faragalinta dowlada Federaalka ? Faallo Xiiso leh
Dec 5, 2018 - 9 Aragtiyood
Garoowe ( Kalshaale ) Siyaasiyiinta Soomaalida waxaa dhaqan soo jireen ah u noqday in Fashilkooda Siyaasadda ay ku eedeeyaan dushana u saaraan Cid kale, ugana baxsadaan Mas’uuliyaddii ay Dadka iyo Dalka u qaadeen. Waxaana Tusaale kooban u qaada karnaa;
1. Jabhaddii USC markii ay ku fashilantay Xasilinta iyo Hoggaaminta Dalka waxa ay eeddii fashilka dusha u saartay Saaxibadood SULUX iyo MAANAFEYSTO!
2. Madaxweyne Cabdiqaasim Salaad waxa uu eeddii fashilkiisa dusha u saaray Qab-qableyaashii ilma adeertiis ee Xamar iyo R/Wasaarihiisii Xasan Abshir oo ka goostay markii uu tabar dhigay!
3. Qab-qableyaashii Xamar ayaa eeddii fashilkooda dusha ka saaray dawladdii ay Waziirada iyo Xildhibaanada ka ahaayeen ee Madaxweyne Cabdullahi Yusuf AUN markii ay doorteen kadibna ay la heshii-waayeen!
4. Madaxweyne Cabdullahi Yusuf ayaa fashilkiisii ku eedeeyey R/wasaare-yaashiisii Cali Maxamed Geedi iyo Nuur Cadde oo isagu doortay kadibna is khilaafeen!
5. Maxkamadihii ayaa fashilkoodii ku eedeeyey Dawladdii Federaalka oo ay la heshii-waayeen, kadibna ku dalbatay dowlada Ethiopia!
6. Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa fashilkiisii ku eedeeyey saaxibadiis Xizbul-Islaam iyo Al-Shabaab oo la dagaalay iyo R/Wasaarihiisii Gaas oo la tartamay!
7. Madaxweyne Xasan Sheakh ayaa Fashilkiisii Siyaasadda ku eedeeyey R/Wasaarihiisii ugu danbeeyey oo la tartamay iyo kuwii ka horeeyay ee uu la heshii-waayey!
Filimkaas oo kale ayaa maantana ka socda Gobalada Dalka sida:
1. Madaxweyne Xaaf oo ku xigeenkiisii Carabey ku eedaynaya Xamar ayaa laga soo diray, markii uu ku fashilmay in uu la heshiiyo taladana la qeybsado?
2. Shariif Xasan oo khilaafay Dastuurkiisii ku xigeenna aan sameysan 4 sano ayaa ku eedeeyay Xamar in ay ka qaadatay Xildhibaanadii uu Gacantiisa ku qortay, Guddigii uu Gacantiisa ku Magacaabay iyo Guddoonkii Barlamaankiisa ee uu Qalinkiisa ku xushay?
3. Gaas ayaa ku xigeenkiisa Camey ku eedeeyay in Xamar laga soo diray lana rabo in Puntland lagu bur-buriyo! Camey ayaa ku Jawaabay in Gaas iyo Farmaajo ay iska xigaan saaxiibana horey u ahaayeen, Xamarna ay Siyaasadda iskala soo bilaabeen! Iyaga oo ay u hartay hal bil kaliya ayey muuqataa in ay kala quusteen!
4. Axmed Madoobe ayaa laga yaabaa in uu maalmaha soo socda ku eedeeyo ku xigeenkiisa Maxamud Sayid fashilkiisa Gedo!
Hadaba goormee ayaan gaari doonaa in Siyaasiyiinta Soomaaliya ay dusha saartaan Mas’uuliyadda Fashilka Hawshii loo Igmaday haddii ay ku fashilmaan, iyaga oo aan Cid kale kula meereysan?
Siyaasiga ah Madaxweyne, Gudoomiye Gole, Gudoome Xizbi iwm! Haddii uu Qanci waayo ku xigeenkiisa kaliya sidee ayuu Dal iyo Dad u Hoggaamin karaa?
Camey iyo Carabey Madaxda Xamar ka hor ayey joogeen Gobalada xilna haayeen ee sidee looga watay looguna diray?
Sow Madaxweyne-yaashu ugama dhawayn Xamar ku xigeenada maxey ugu eedeeynayaan! Mise Cudurka fardaha ayey ka Gubayaan Dameeraha?
W/Q Dr Maxamed Nuur Gacal
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (9)
Kani ma ilma caruura ayuu u sheekayn waamaxay waxan uu soo qoray.
Adeer Libaax nin ganay iyo nin galladayba og.Puntland iyo shacabkeedu way og yihiin habeen ninkii isha ku godey mana aha dad huuhaa iyo waxaan jirin loo akhriyo.
@Asc Puntlandi waa budhbudhay alx.wbt
hhhhhhhhhhh nin xaafad uu qaxooti ku yahay ninkii lahaa ku qabsanaya hhhhhh camey muxuu kula shuraakoobey puntland hhhh dadna ma hayo dalna ma hayo hhhhh waaba waali cas hhhhhhh cajiib kkk
@Xaange kk anigu ma qabo Puntland in la burbrinayo,shacabka aad sheegtay waa shacabkii oo uu Saacid u hiilinayo HURDAAYE loosoo dhiibay.Siyaasiyiinta Puntland ayaa shacabka ka dhaadhiciya wax ay rabaan shacabka Puntland-na qabyaalad ayaa ku weyn dee Farmaajo reerka uu yahay ma inagaa ka dhignay,ma inagaa Somali doorta niri,ma inagaa Somali kaa jeclaysiinay-MASAYRKAAGA EED.
@ABWAAN DEEQ sax ma ahan hadalkaagu Puntland dad fiican ayaa ku badan amaanka ay heleenna waa in la bogaadiyaa lana taageeraa Puntland in ay burburto lama qbali karo.Puntland-ta hadda aan arkaynana ma ahan mid Somalinimo rabta ee ujeedkoodu waa buuq qaylo isqabqabse iyo reer hebel.
Shacabka Puntland qabiil baa lagu kiciyaa waxaan xasuustaa waqtigii Saacid si siyaasiyiintu taageero u helaan waa in lagu kiciyaa ninkani waa ilkayar nijaas ah waa dadka ugu fudud ee qabiil lagu kicin karo waliba beeshaa Farmaajo wax kale ma jiraan waa been huuhaa in villa tacbaan laga soo abaabulay Camay,haddiise laga soo abuubulay ninkii 4 sanno lasoo shaqeeyay miyaa looga hoosmaray?sow daciifnimo ma ahan?
Labadaba daadkaa la tegeya.
ISIS made in ISRAELI.
ISIS leader Abubakr ex-Name (Aka Elliote Shimon)100% he was Mossad Agent Al-Israeliyah.sure.isn’t Muslims.sure!.
Isis they never attack ISRAELI !!!!!.
We are Muslim,ma aqbali karo kooxo yaryar ooloo samaystay ceebaynta Diinta Islaamka & in lagu burburiyo Dunida Islaamka.
ISIS,Boko Haram,Alqacida,Alshabab dhamaantood waxay hoos tagaan Washington DC & Tel Avive.they are not Muslims 100% sure.
Edward Snowden thank you.why?waxbadan buu noo cadeeyey wiilkaas yar ee Maraykanka ah.
Dawladu xaqbay u leedahay inay faragaliso meelkasta oo ku taala wadanka Somaliya.Dawladu xaqbay u leedahay inay faragaliso meelkasta oo ay joogaan Kooxo qaswadayaal ah.
Ninka diidan inay dawlada Somaliyeed lug ku yeelato cidda noqonaysa maamulaha Gobolka Puntland waa Tuug raba in lagu sii jiro habaan la’aantii Somaliyeed.
Maxay u tahay dawlad hadii aanay faraha galinayn wadanka oo dhan?
Waxbaa la burburinayaa!!
Maxaa la burburinayaa oo dadka u dhisnaa?
30 sano ayaa dadka lagu wareerinayay sheekadan wadkeed galay oo qabyaalada/
Dowladda dhexe hadday dowlad fiican waxay tixgelin lahayd cidda shacabka keensado oo wata kalsoonida shacabka.
Maaha midka ayaga wataan oo kabaqad u ah.
Camey markii la weydiiyey dowladda dhexe ma faragelin ayey wadaa, wuxuu ku jawaabay, dowladda waxay rabtaa nin wada shaqayn karaan!
Daanyeer Ina Camey masaas ayuu ugu abaal guday Puntland.
Puntland Yamyam iyo Qaraad weyn iyo agoonti kacaanka oo maanta duurwarteeg ah ayaa Puntland habaar ladaba socda.
Farmaajo iyo Khayre oo Galmudug waxkaqaban waayey, goboladdii nabadda aha qasaya
Siyasadii gudaha waa ku fashilmeen.
Kuwaas ka sugi maayo in Muzaveni ka hoos baxayaan.
LOP waan ku salamayaa kolay jiniyo waaweyn oo qabiil uu ka mid yahay ayaa kugu shaqaysanaya dadku waa qaar agoon ah iyo qaar carmalooyin ah oo uu kacaankii ka geeriyooday oo edeb lahaa sababtoo ah in ay baqaan mooyee maba xishoodaan.
Puntaland aan kula difaacno,hase yeelin daayeernimo wax ka sii xun.Maamul goboleed raba in isaga wax laga dhagaysto suurogal ma ahan.Reer Puntland waxa ay xaq u leeyihiin ka badan ha isaga hareen.
Dawaladda dhexe waa wax la idinku dagaal galainyo Camaeyna wuu og yahay,adigana waad og tahay in aanay dawaladda dhexe faragelin balse shacabka MJ waa in wax laga iibiyaa,miyaadan arag nin SNM oo aan waligii dagaal gelin haddana la leeyahy waa mujaahid.Waa un taa beenta la isu dhiibo MJ baa la dulmayaa?kkkkkkPuntland baa la duminayaa kkkkkk?Who is going to destroy Puntland?that is false.Nidaamku wuxuu fiican yahay maamul goboleed baad tahay ku ekow shaqadaad FULLSTOP.